June | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Dr Subra: Doctors must be indemnified and continue education under amended law
June 30, 2017 drkokogyi
KUALA LUMPUR: Doctors will be required to have indemnity insurance and attend education courses in order to continue practising under the new law, says Datuk Seri Dr S. Subramaniam (pic).
The Health Minister said as part of the amendments to the Medical Act 2012 which comes into force Saturday, doctors would need to have both in order to apply for an Annual Practicing Certificate (APC).
သူရဦးအောင် ကို အနေနဲ့ သာသနာတော်သန့် ရှင်းတည်တန့်ေ၇းလုပ်မယ်ဆိုယင်…
အန်ကယ် သူရဦးအောင် ကို အနေနဲ့ သာသနာတော်သန့် ရှင်းတည်တန့်ေ၇းလုပ်မယ်ဆိုယင်…
ရဟန်းတွေ ကိုသာ မက
လက်ရှိ တရားစာ တွေ မှာ ဘုရားဟော မဟုတ်တာတွေ ကို ပါ ရှင်းလင်းသုတ်သင် ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၊ဗေဒင် ဘုန်း ကြီးတွေ ကို သေချာ စွာ၇ှင်းလင်းဖို့ လိုအပ်ပါမယ် Continue reading →
Immigration Minister and President U Thein Sein’s videos confirming that there were no illegal immigrants in Rakhine (Rohingya)
လင်းရောင်ခြည် addedanew video.
ရှယ်ပေးကြပါ။ လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။
တစ်ဖက်နိုင်ငံ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) မှ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူ မရှိကြောင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီတို့၏
ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူ မရှိပါက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်မ်များအား ဘင်္ဂလီဟု အတင်းအမည်တပ်သမုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံကာ စံနှုန်းနှစ်မျိုး သုံးစွဲနေရပါသနည်း။
Bhakto Ab to Samjho‘s video.
Successive Myanmar Military keep on using Military Implant Fake Monks to incite hatred on Muslims and repeatedly create Anti-Muslim riots
Zaw Win Maung postedavideo from June 20, 2013 to his Timeline.
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခု မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ဒီVideoထဲ့က Image တွေကိုမပြောင်းပါနဲ့။ လွတ်လပ်စွာများများရှယ်နိုင်ပါတယ်။
A song for U Wirathu ဆရာ​​တော်​ဦးဝီရသူအတွက် သီချင်း
အွန်​လိုင်း တွင်​ နာမည်​ကြီး ​နေ​သော ဆရာ​​တော်​ဦးဝီရသူအတွက် သီချင်းစပ်ထားတဲ့ ​ဗီဒီယိုဖိုင်​ပါ